Hisidina eny amin’io 26 jona io ihany koa ireo helikoptera sy fiaramanidina ho an’ny foloalindahy Malagasy. Nisy 4x4 zato mahery vao tonga ihany koa, nakarina eto Antananarivo nanomboka ny alahady alina sy omaly alatsinainy maraina izay efa nampitondraina laharana amin’ny takelaka mena, voalaza fa hanampy ny fampitaovana ny foloalindahy.
Misy etiketin’ny Sodiatrans, orinasa manao fitaterana an-tanety, an-dranomasina ary anabakabaka, ireo fiara tsy mataho-dalana ireo. Tsy nambara kosa hoe : volan’ny ministera na andrimpanjakana iza no nividianana ireo fiara ireo.
Amin’ny ankapobeny ny fividianana fiaram-panjakana dia mila fanomezan-dalana herintaona mialoha avy amin'ny Praiminisitra, izay vao azo alefa ny tolobidy. Raha izao izany no nivoaka tao amin’ny seranantsambon’i Toamasina ireo fiara 4x4 efa zato mahery ireo, dia tany amin’ny telo volana voalohany tamin’ity taona 2019 ity no nalefa ny tolobidy mikasika izany. Izany hoe tokony voarakitra tao amin’ny lalàna mifehy ny tetibola (LFI) nolanian’ny depiote tamin’ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa tamin’ny 2018, fa tsy tamin’ny tetibola nasiam-panitsiana (LFR), ary tokony hita ao amin’ny tranokalan’ny ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) ny tolobidy mikasika izany ; raha tsy hoe mikasika fiarovam-pirenena ka nosokajiana ho toy ny fitaovam-piadiana ny entana. Tolobidy tamin’ny 2017 anefa no farany hita ao amin’ny tranokalan’ny ARMP.
Raha ity farany no nitondrana azy dia tsy mandalo tolobidy ny fitaovam-piadiana fa afaka atao « par silence » noho izy saropady loatra ary amin’ny tranga toy izay, dia mety nanome fanomezan-dalana haingana be koa ny praiminisitra noho ny maha zava-dehibe azy sy ny hamehana.
Ny lojikan’izay dia volan'ny LFI no nanafarana na nividianana ireo fiara raha zohiana amin’ny fotoana nahatongavany tao Toamasina. Raha tsy ao anaty LFI kosa dia nanao ny antsoina hoe : « aménagement de crédit » ny fanjakana, izany hoe nanalana kely ny tetibolan’ny ministera na andrimpanjakana atsy, nanampiana ny aroa nenti-nanana ny fividianana ireo fiara. Fanao ary ara-dalàna io « aménagement de crédit » io.
Navela hanao « investissement » izany izay ministera na andriampanjakana nividy an'ireo fiara ireo raha toa ka nogiazana ny volan'ny ministera hafa rehetra. Izay ilay hoe : mihafy ny ankizy tsy mihinan-kanina fa mividy fiara i Dadah...